रियामाथि मिडियाको दुर्व्यवहार | Hamro Biratnagar
गृह पेज अन्तराष्ट्रिय रियामाथि मिडियाको दुर्व्यवहार
रियामाथि मिडियाको दुर्व्यवहार
नयाँ दिल्ली । भदाै २२
बलवउडका नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपश्चात उत्पन्न परिस्थितिले अहिले नयाँ मोड लिइरहेको छ । उनको निधनपछि विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि छानविन पनि भैरहेको छ । मिडिया र प्रहरीको निशानामा उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती परेकी छिन् ।
बयानका लागि एनसीबीको अफिस पुगेकी रियालाई आइतबार मिडियाका क्यामेराले घेरेका थिए । संचारकर्मीले न त सामाजिक दुरीको नै ख्याल राखे न त रियाको मौलिक हकको सम्मान नै गरे । प्रहरीले सुरक्षा दिएर रियालाइ एनसीबीको अफिस भित्र पुर्याएको थियो ।
मिडियाकर्मीसँग रियाको केहीबेर वादविवाद नै हुनपुग्याे । उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि बलिउडका कलाकारले आक्रोश पोखेका छन् ।
कलाकार परेश रावलले ट्वीट लेखेका छन् –‘मिडिया हुन् कि भेडा ?’
नायिका तापसी पन्नुले पनि लेखिन्– ‘न्यायको नाममा मिडियाले एक व्यक्तिलाई दोषी सावित हुनु अगाडि नै उसको बाच्ने अधिकार वञ्चित गरिदिएका छन् । म इमानदारितका साथ भएर प्रार्थना गर्छु - कर्मले यी सबै मानिसहरुलाई पत्ता लगाएर उनीहरुसँग हिसाब लिनेछ । जो यती तल्लो स्तरमा गिरेका छन् ।’
त्यस्तै नायिका दिया मिर्जाले पनि आक्रोश व्यक्त गर्दै मिडियालाई गिद्धकाे संज्ञा दिपएकी छन् । भनेकी छिन् –‘यो बिषयमा कानुनी रुपमा कदम उठाउन जरुरी छ । यो व्यवहार निन्दनिय छ । रियालाई अफिस जानका लागि बाटो र सामाजिक दूरीको अधिकारी किन दिइएन ? मिडियाले गिद्धको जस्तो व्यवहार किन गरिरहेको छ । कृपया, उनलाई बाटो दिइयोस् । उनी र उनको परिवारमाथिको हमला बन्द गरियोस् ।’
ट्वीटरमा नायिका हुमा कुरेशीले लेखेकी छन् –‘हामीमा के समस्या छ ? हामी यस्तो व्यवहार गर्न सक्दैनौं । पक्कै पनि वास्तविक कुरा बाहिर आउन आवश्यक छ । तर, रिया एक महिला भएको नाताले पनि उनलाई सामाजिक दू्रीको अधिकार छ ।’
[caption id="" align="alignnone" width="493"] तस्वीर - अनलाइन खबरबाट[/caption]
सुशान्तका बारेमा अहिले भारतमा अनेक अड्कलबाजी कािटन थालिरहेकाे बेला एनबिसीकाे नजरमा प्रेमिका रिया पर्नुलाइ धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।
अघिल्लो समाचारदेश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन निजामति कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
अर्को समाचारमच्छिन्द्रनाथकाे रथ तान्ने क्रममा झडप हुँदा पक्राउ परेका ६ जनामा कोरोना संक्रमण